Unyaka omtsha wamatshayina 2017 Iminqwenelo Unyaka omtsha wamatshayina 2017 Iminqwenelo
Unyaka omtsha wamatshayina 2017 Iminqwenelo
Nandipha kunye Chinese uNyaka oMtsha 2017 uthandayo siye eqokelelwe kuwe. Sikunqwenelela Happy Chinese Unyaka Omtsha 2017. Apha ngabo baye kuluhlu kwaye kusenokubonakala ogqibeleleyo. Akucele iphumele bonke bephela.
Chinese Iminqwenelo Unyaka Omtsha 2017
IsiTshayina amagama amatsha imibuliso kunyaka
Zai cǐ xīnnián Zhi Ji, wǒ kusasa Furen Xian nǐ Ji nǐ de Jiari Zhi yǐ jiérì de wènhòu, Bing Zhu nǐmen xīnnián kuàilè, Shiye yǒu Cheng, Xingfu jiating.
Kumsitho kuNyaka oMtsha, ukuze mna nomfazi wam wandise kuwe nezakho simbulisa, Sikunqwenelela Nonyaka Omtsha ukonwaba, omsebenzi yakho impumelelo enkulu kunye nolonwabo nosapho.
IsiTshayina imibuliso abatsha ngonyaka ngoonobumba biet
zhu hǎoyùn, Jiankang, Yi Gen etafileni jiayao Kuaile duguo nǐ Xinnian.
Umnqweno omhle, impilo entle, nomxhelo owonwabileyo, badlule Nonyaka Omtsha ukonwaba.
Phuma: Unyaka omtsha wamatshayina 2017 kuchaphulo
Iminqweno Rooster Unyaka 2017
Yuan míngliàng xǐqìng ye xīnnián zhúguāng wēnnuǎn Yi Nian Zhong Mei yemfazwe izolo izolo ha ha, Zhu Huanhuan xǐ xǐ nǐ nangona Xinnian!
Ngamana ekuvutheni eliqaqambileyo kwaye lemibhiyozo of New Year isibane ukufudumeza yonke nyaka imihla ngokuthi. Unethemba uya kuba nexesha elingummangaliso besonwabela loNyaka oMtsha yonwabile ngandlela zonke.
Chinese iminqweno konyaka omtsha
Gei nǐ wǒ Wujin ukusebenzisa de Zhufu, tamen Chengwei yǒngheng ngokucacileyo wǒmen yǒuyi ukusebenzisa de Jinian.
Ndiya kukunika kraca-new iminqweno emihle olungenasiphelo. Nceda sizamkele kukhunjulwa entsha ubuhlobo bethu elide.
onqwenela kunyaka omtsha Chinese
Zhu wǒ tsotsi qīn'ài de fùmǔ jiérì yúkuài!
imibuliso Season ukuba abazali bam osenyongweni!
2017 IsiTshayina iminqweno konyaka omtsha
UJ dui wǒmen nǐ Qǐng nǐ Jieshou quanjia de meihǎo Zhufu, Zhu nǐmen xīnnián kuàilè.
Nceda ukwamkela iminqweno yethu kuba wena iyeyakho Nonyaka Omtsha ukonwaba.
CNY imibuliso ngesiTshayina
Ndibulisa kunye banqwenelele kulonwabo kunye amathamsanqa kunyaka ozayo.
Phuma: Chinese New Year Wallpapers 2017
IsiTshayina iintsikelelo konyaka omtsha
Unyaka Omtsha lixesha ngenxa yokuvuya nemihlali ... kuba akukho udidi.
IsiTshayina iminqweno abatsha ngonyaka ngesiTshayina
Tong Yuan Zai Kuaile yǔ suishi umlomo - umlomo yǔ wǒmen cunbu rutong Buli.
Ngamana ulonwabo kukulandela naphi ... njengokuba senze ntoni.
kunyaka omtsha Chinese onqwenela abahlobo
Ndivumeleni ukuba Siyavuyisana nawe phezu ukufika kuNyaka oMtsha kwaye ukwandisa kuni yonke iminqweno yam okuhle impilo yakho egqibeleleyo, nendyebo engenasiphelo.
kunyaka omtsha Chinese onqwenela intsapho
umnqweno CNY Chinese
imibuliso ngexesha kunye ngeminqweno emihle,Sikunqwenelela WayekukuKhanya uNyaka oMtsha wovuyo。
jiérì Xiànshàng ye wènhòu yǔ Zhufu, Yuan kutyhilwa nǐ yǒngyǒu shengji chongmǎn Yige Huanle de Xinnian.
imibuliso ngexesha kunye neminqweno ngokunyanisekileyo Nonyaka Omtsha eliqaqambileyo banoyolo!
kunyaka omtsha Chinese Iminqweno isithandwa
Ngamana kuza ibe lithamsanqa!
Siyathemba benindithanda ingqokelela yethu Chinese iminqweno Happy new kunyaka 2017 yaye iya kubuyela kuthi yonakekelo ngakumbi nangakumbi. Sijonge phambili kuwe ngolangazelelo. Chinese iminqweno konyaka omtsha kuhlala apha.